Vatsvakurudzi vanodzidza nzira yekudzivirira vashandisi 'kudzokorora kukuvara kwekunetseka.
The wiricheya anga ari shamwari yaLucy Spruill kwemakore makumi matatu achimubatsira kuwana degree raTenzi, basa, imba uye mhuri yakamupandukira.
Spruill akadzidza makore matatu apfuura pazera remakore makumi mashanu kuti iye zvishoma nezvishoma akabvarura tendon mumapendekete maviri muchikamu nekuti iye kusundwa zvisina kunaka.
"Handina kukwanisa kusimudza maoko angu kukama vhudzi rangu," akadaro. "Handina kukwanisa kusunda ini pasina kurwadziwa kwakanyanya. "
Kana zvasvika pakudzokorora kukuvara kwekushushikana, wiricheya-vashandisi vane typists vakarova nemaira. Vanobata uye kusunda vhiri marimu zuva nezuva uye masikati, kupinza tsinga uye kukuvadza tendons.
Kutsvagisa kuYunivhesiti yePittsburgh kunogona kubatsira vanachiremba uye varapi kudzidza kudzidzira wiricheya-vashandisi chitima wiricheya-vanoshandisa zviri nani.
Hunhu hwave, "Hei, kurwadziwa chikamu chetikiti che kushandisa a wiricheya. tora akambozvijaira, "akadaro Rory Cooper, director weHuman Engineering neResearch Lab. Asi" iyo pfungwa haisi kurarama, iri kuva nehupenyu. "
Muchidzidzo chikuru cherudzi rwayo, lab iri kudzidza nzira dzevanhu uye dzavo mavhiripu basa mawiricheya avo anoshanda pamwe chete. Makomputa akabatanidzwa mumavhiri esachigaro, uye masensa infrared anomisikidza ruoko rwemunhu kuti anongedze zvinokanganisa nzvimbo.
Vanosvika mamiriyoni 1.5 vekuAmerica vanoshandisa mavhiripu. Of ivo, zvidzidzo zvakaratidza kuti kanokwana hafu vanotambura necarpal tunnel syndrome kumanikidzwa kweiyo medial nerve pachiuno uye hafu kukuvara kwepafudzi kunge rotator cuff tendinitis kana misodzi, akadaro Dr. Michael Boninger, director wezve lab.
For wiricheya-vashandisi Kune wheelchair-vashandisi, chero kuipa izvo zvinogumira kufamba kana ruoko rwepafudzi zvinonyanya kukanganisa "kune mumwe munhu anofamba nemaoko," akadaro Boninger.
Kutambudzika kwepfudzi kunogona kudzivirira a wiricheya-kushandisa kubva pamubhedha kuenda pachigaro kana kubva pachigaro kuenda kuchimbuzi kana mota.
"Varwere vazhinji vanhu varwi, uye vakunda kuremara, uye zvakafanana nekurohwa neimwe, "akadaro." Vanobva pakuva vakazvimiririra zvachose kusvika pakuva vanovimba zvakazara. "